China Soft PVC Cable Winders fekitari uye vagadziri | SJJ
Tiri nyanzvi yekutengesa simbi yekuyeuchidza zvinhu, lapel pini & mabheji, menduru, dambudziko mari, makiyi, makadhi emapurisa, machira & dzakarukwa zvigamba, lanyard, nhare accessories, nguwani, zvinyorwa uye zvimwe zvekushambadzira zvinhu.
Kutenda rutsigiro rwemafekitori ane saiti yekugadzira pamusoro pe64,000 mativi emamirimita uye vanopfuura 2500 vane ruzivo vashandi pamwe neazvino otomatiki electroplating chirimwa uye yakapfava enamel kara yekupa michina, isu tinodarika vakwikwidzi vedu mukushanda kwakanyanya, nyanzvi, kutendeseka uye kugona kwazvo chigadzirwa mhando, kunyanya huwandu hwakawanda hunodiwa munguva pfupi kana yakaoma magadzirirwo aida vashandi vane ruzivo. Yakazvitsaurira kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vedu vane ruzivo vashandi vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona kuzere kwevatengi kugutsikana.
Soft PVC Cable Winders anobatsira kana iwe uchichaja ruoko kana kuchenesa imba yako. Ivo anogara achigadzirwa neSoft PVC muridzi nesimbi waya waya yakashongedzwa kugadzirisa tambo. Tine zvakawanda zviripo kuumbwa neakanaka maumbirwo uye mavara mu2D kana 3D, ayo marogo ako anogona kudhindwa kana kunyorwa pa ...
Soft PVC Cable Winders anobatsira kana iwe uchichaja ruoko kana kuchenesa imba yako. Ivo anogara achigadzirwa neSoft PVC muridzi nesimbi waya waya yakashongedzwa kugadzirisa tambo. Tine mijenya yemaumburu aripo ane akanaka maumbirwo uye mavara mu2D kana 3D, ayo marogo ako anogona kudhindwa kana kunyorwa kumberi kana kumashure mativi eiyo waya waya. Vagadziri vanoita iyo Soft PVC Cable Winders kwete chete inyore uye yakapusa, asi zvakare ipa iwo masitaera zvimwe zvinhu uye anoita iyo Soft PVC Cable Winders yakanaka uye inokwezva.
Iyo Soft PVC Cable Winders haisi chete chishandiso chekutsvaira yako kamuri asiwo yekushongedza kupfekedza yako nyika. Malogo ako anotambirwa evatambi vatsva kuti vatsanangure mazano ako uye pfungwa dzako. Paunobuda, iyo Soft PVC Cable Winders zviri nyore kutakura zvekushandisa kwekunze. Samples ichave yakagadzirira mumazuva manomwe uye kugadzirwa ingangoita gumi neshanu mazuva makumi maviri. Mould chibharo ndezvemahara kune izvo zviripo zvinhu, uye diki muforoma kuchaja kune matsva magadzirirwo. Iyo izano rakanaka kushandisa iyo Soft PVC Cable Winders neVabati kana iwe uchirongedza makamuri ako, kana kujekesa mabhegi ako kudzivirira chero nyonganiso.
Zvishandiso: Yakapfava PVC
Zvinokurudzira: Kufa Yakarohwa 2D kana 3D
Mavara: Rudzi rwemberi runogona kufanana nePMS ruvara
Kupedza: Mhando dzese dzezvimiro, maLogo anogona kudhindwa, akavezwa, Laser rakatemerwa uye saka kwete
Zvakajairika Zvakabatanidzwa Sarudzo: Iron waya yakashongedzwa uye nevamwe
Apex 1pc / polybag, kana maererano chikumbiro mutengi wacho
MOQ: 100 bv
Pashure: Yakapfava PVC Wristbands & Bracelets
Zvadaro: Yakapfava PVC Coasters
Yakagadzirwa nemaoko Resin Keychains